Renesas dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny teknolojia fanodinana ADAS sy SoC vaovao - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Renesas dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny teknolojia fanodinana ADAS sy SoC vaovao
Renesas dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny teknolojia fanodinana ADAS sy SoC vaovao
Tamin'ny 17 febroary, nanambara ny tranokala ofisialin'i Renesas fa hisy ny rafitra teknolojian'ny fikirakirana mpamily (ADAS) sy ny haitao mpamokatra rafitra otom-pototra (SoC) amin'ny rindrambaiko toy ny fiara mandeha irery. Eo ambanin'ny maody rafitra vaovao, ny fahombiazan'ny herinaratra sy ny fiarovana ny fiara dia nohatsaraina bebe kokoa.
Taranaka vaovao an'ny processeur SoC mandeha ho azy izay novolavolain'i Renesas
Ny fanatsarana ny vokatra vaovao dia ahitana indrindra: Convolutional Neural Network (CNN) fitaovana fampandehanana fitaovana, izay afaka manome asa 60,4 trillion isan-tsegondra (TOPS) fahombiazana amin'ny fianarana lalina, ary fitambarana herinaratra TOPS / W 13.8; fanampiana azo antoka amin'ny alàlan'ny fiara, afaka mamantatra haingana ny tsy fahombiazan'ny fitaovana tsy mandeha izy ary mamaly ara-potoana; tohano ireo lahasa misy rindrambaiko miaraka amin'ny ambaratonga fiarovana samihafa mba hihazakazahana mifanitsy amin'ny SoC nefa tsy mifanelingelina. Ireo haitao vaovao ireo dia nampiharina tamin'ny fiara mpamorona fiara R-Car V3U an'ny Renesas farany.
Renesas dia hanambara ny fampiharana ireo teknolojia vaovao voalaza etsy ambony ao amin'ny Fihaonambe Iraisampirenena Iraisam-pirenena 2021 (ISSCC 2021) izay hatao ny 13 ka hatramin'ny 22, 2021.